धागोमा नाच्ने पात्रहरू
घिमिरे युुवराज आइतवार, फागुन १, २०७३ 1751 पटक पढिएको
‘तर हाम्रोमा पपेट गभरमेन्टको पपेट थिएटरसँग कुुनै सम्बन्ध छैन’, मैले ठट्टा गर्दै भनेँ । निर्देशक खिन मोङ् ह्ट्वीका लागि भने यसको राजनीतिक अर्थ रहेछ । सन् २०१४ मा खिनद्वारा निर्देशित पपेट थिएटरले बैंकक इन्टरनेसनल फेस्टिभलमा उत्कृष्ट पुुरस्कार पायो । ८० देशका १६५ वटा फरक प्रस्तुुतिमा सुुरुमा फ्रान्स, जर्जिया र बर्मा छनोटमा परेका थिए । अन्त्यमा खिनको समूह पुुरस्कृत भए ।
खिनका अनुुसार यो समाचार विदेशी मिडियाहरूमा आयो तर बर्माभित्रकै चाहिँ कुुनै पनि मिडियामा समाचार आएन । उनी भन्छन्, ‘सन् १९४८ मा ब्रिटिस शासन हटेपछि बर्मामा जति पनि गभर्मेन्ट आए तिनलाई पपेट गभरमेन्ट भनियो । त्यसैले तत्कालीन गभर्मेन्टले पनि पपेट थिएटरलाई व्यंग्यका रूपमा लिन्थ्यो । शासकहरूसँग डराएर मिडियाहरूले पनि समाचार छापेनन् ।’ शासकका बारेमा आममान्छे वा मिडियाले भन्न नसक्ने कुुराहरू पपेटहरूले भन्ने हुुनाले शासकहरू यससँग डराउने गरेको उनको धारणा छ । खिन थप्छन्, ‘अबको नयाँ राजनीतिक परिवेशमा पपेट थिएटरलाई अलिक सहज छ ।’
बर्मेली लोक पपेट इतिहासमा धेरै नाम आउँछन् । यसका बारेमा बर्मेली भाषामै धेरै किताब छापिएका छन् । बर्मेली प्रसिद्ध पपेटर तथा लेखक ये द्वायले बर्मेली भाषामा लेखेको किताबलाई बर्मेली पपेटसम्बन्धी आधिकारिक किताब मानिन्छ । अंग्रेजी भाषामा तीन प्रसिद्ध पुुस्तकहरू छन्– नियोल एफ सिंगरको ‘बर्मिज् पपेट्स’, मा थानेगीको ‘दि इलुुजन अफ लाइफः बर्मिज मरिनेट्स्’ र एलेक्स बर्नस्को ‘बर्मिज पपेट्र्जि’ । निर्देशक खिन मोङ ह्ट्वीसँगको रोचक प्रसंगमा म केन्द्रित हुुन चाहन्छुु । बर्माको प्रसिद्ध सहर रंगुुन जाने योजना भएदेखि गुुगलमा म रंगुुनको रंगमञ्च र कलाबारेमा खोजिरहेको थिएँ । केहीपटकको खोजमा पपेट्री होम नै अगाडि देखा पर्‍यो ।
रंगुुन ओर्लिएको केही साँझपछि पपेट्री होमको वेभ पृष्ठ खासै नपढी उल्लिखित ठेगानामा इमेल लेखेँ । मेरो चाहना कलाकारहरूसँग भेटेर कुुराकानी गर्नुु थियो । तर, त्यही साँझ ६ बजे पपेट प्रस्तुुति छ भन्ने उत्तर ईमेलमा पाएपछि म फुुरुंग भएँ । पहिलो झटारोमै ठूलो फल झर्‍यो । गुुगल म्याप हेर्दै डाउन टाउनबाट ट्याक्सीमा करिब आधा घन्टा पश्चिम हानिएपछि म पुुगेँ खिनको पपेट्री हाउसमा । म सही ठाउँमा आइनँ भन्ने भ्रम मलाई पर्दै थियो । मसँगै केही गोरा छाला भएका मानिस पनि भएकोले सोधेँ, ‘तिमीहरू पनि थिएटरमा जान लागेको हो ? ’ उनीहरूले ‘हो’ भनेपछि ढुुक्क हुुँदै उनीहरूसँगै सिँढी उक्लिएँ ।
जब पपेटभन्दा पपेटरहरू दृश्यमा आउँछन् रंगमञ्च कुुरूप हुुन्छ । पुुँजीवादले निर्देशित गरेको राजनीतिक थिएटर खराब थिएटर हो ।
जब एउटा समान्य ढोकाबाट एक किशोरले हामीलाई कोठामा स्वागत गरे म ट्वाँ परेँ । रंगमञ्चसँग सम्बन्धित भएर म यसरी धेरै कमपटक ट्वाँ परेको छुु । र, यो मेरो लागि साँच्चिकै नौलो र प्रेरणादायी समय रह्यो । के म साँच्चै थिएटर भित्र छुु ? म कहाँ आएँ ? औंलामा गन्न सकिने अरू दर्शक पनि मुुस्कुुराउँदै कोठाको चारैतिर हेरिरहेका छन् । म कुुर्सी गन्न थालेँ । जम्मा १६ वटा कुुर्सी चारवटा तह मिलाएर राखिएका छन् । एउटा लाइनमा चारवटा कुुर्सी छन् । हाम्रोअगाडि सानो चिटिक्क परेको मञ्च बनाइएको छ । मञ्चमाथि सुुन्दर स्ट्यान्डमा रातो मखमले पर्दा झुुन्डिएको छ । मेरो दिमागमा पद्मकन्या क्याम्पसको नृत्य कोठा र छेउको अलिकति मञ्च उठाएर बनाइएको तबला सिकाउने मञ्च सम्झना भइरहेको छ ।
यतिखेर मित्र चन्द्र पाण्डे र म नेपालमा भएका नाटकघर वा नाटक देखाउने ठाउँका बारेमा पुुस्तक लेखेर अन्तिम चरणमा पुुगेका छौं । यही बहानामा हामीले काठमाडौंका साना–ठूला रंगमञ्च चहारी–चहारी हेरेका थियौं । तर, यति सानो रंगमञ्च म जीवनमै पहिलोपटक देख्दैछ । मेरो दिमाग यतिखेर शून्यप्रायः भएको थियो । मैले नाटक र दर्शकको व्यावसायिकतासम्बन्धी बनाइरहेको बलियो अवधारणाभित्र आफैंसँग घम्साघम्सी भइरहेको थियो । उक्त थिएटरभित्र सुुरुमा हामी आठनौजना दर्शक थियौं । थिएटर भन्नै पर्‍यो । यो सबै मान्ने कुुरा रहेछ । त्यसैले प्रोसेनियम थिएटरका पारम्परिक व्याकरणहरूलाई भत्काएर थिएटर वा नाट्यशालाले आफैं अस्तित्व बनाउने रहेछ । एउटा अन्तर्वार्तामा रंगकर्मी क्रिस ब्यान्डले भनेका छन्, ‘जहाँ कलाकार र दर्शकको उपस्थिति छ त्यही हो थिएटर ।’ उनीसँगको लामो अन्तर्वार्ता नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रतिष्ठानको कला पत्रिका रंगनादमा छापिएको छ । त्यसैले म फेरि आफूलाई विश्वस्त बनाउँदै थिएँ ।
म थिएटरभित्र छुु । अहिले म नेपाली थिएटरको समाचार पनि पढिरहेको छुु । रंगकर्मी राजकुुमार पुुडासैनीले वाल्मीकि क्याम्पसको प्रांगणमा कालो पर्दा बेरेर सुुरु गरेको थिएटर यात्रा गर्दैै भर्खरै काठमाडौं प्रज्ञा कुुञ्ज नामको स्कुुल परिसरमा पुुगेको छ । त्यहाँ रंगकर्मी टंक चौलागाईं स्कुुले बच्चाहरूसँग आफ्ना चारवटा नाटक तत्काल निर्मित थिएटरभित्र मञ्चन गर्दैछन् । हो म यता करिब १५ फिट लम्बाइ र १० फिट चौडाइ भएको घरको कोठाभित्र सिर्जित थिएटरभित्र छुु । जब ठीक ६ बज्यो निर्देशक खिनले फुुच्चे मञ्चअगाडि उभिएर आफ्नो प्रस्तुुतिको बारेमा बोल्न थाले । करिब १० मिनेट उनले आफ्नो प्रस्तुुतिको बारेमा बोले । त्यति खेरसम्ममा बाँकी कुुर्सी पनि भरिए ।
१६ वटा कुुर्सी भरिएर हाउसफुुल भएको थिएटर अब सुुरु हुुँदैछ । यस प्रस्तुुतिको समय करिब ४५ मिनेटको हुुनेछ । यसभित्र पाँचवटा फरकफरक प्रस्तुुति हुुनेछ । भाषारहित सांगीतिक यस प्रस्तुुतिमा बज्ने सबै संगीत बर्मेली लोक संगीत हो । मैले हेर्न पाएका प्रस्तुुतिहरूमध्ये दानव र देवताको युुद्ध, गाउँले रक्स्याहा वृद्धको कथा र छुुद्र घोडालाई निक्कै संघर्षपछि आफ्नो बसमा राखेर घोडचडीमा हिँडेको युुवकको कथा रोचक लाग्यो ।
पपेटको शक्ति के भने, कालो लुुगा लगाएका पपेटर (पपेट चलाउने कलाकार)हरू आआफ्ना हातका औंलाहरूमा धागो नचाइरहेका हुुन्छन् । कुुशल पपेटरको हातमा परेपछि पपेटले के गर्दैन ? आँखीभौंसमेत हल्लाउँछ, चुुम्मनसमेत गर्न भ्याउँछ । तर, दर्शकले पपेटरलाई बिर्सन्छ र पपेटलाई जीवन्त पाउँछ । मानांै पपेट निर्जीव हैन । उसमा प्राण छ । तर हाम्रो गभरमेन्टका पपेटरहरू खिन मोङ ह्ट्वीका पपेटरजस्ता कलात्मक छैनन् । धेरैजसो समय पपेट गभरमेन्टमा भन्दा पपेटरतिर ध्यान जान्छ । उत्तर या दक्षिण या पश्चिमका बढेमाका पपेटरहरू हामी प्रस्टै देख्छौं । जब पपेटभन्दा पपेटरहरू दृश्यमा आउँछन् रंगमञ्च कुुरुप हुुन्छ । त्यसैले अगष्टो बोआलले भनेका छन् पुुँजीवादले निर्देशित गरेको राजनीतिक थिएटर खराब थिएटर हो ।
संसारमा पपेट थिएटरको इतिहास लामो छ । लगभग पाचौं सेन्चुुरीमा सुुरु भएको मानिन्छ । पपेट थिएटरका धेरै किसिम छन् । सामान्यतया पपेट थिएटर चार किसिमका हुुन्छन् । छायाँमा नचाइने पपेट, औंलामा घुुसारेर नचाउने पपेट, हातमा घुुसारेर नचाउने पपेट र तार वा डोरीमा झुुन्ड्याएर नचाउने पपेट । बर्मामा यसको सुुरुआत १५औं शताब्दीमा भएको देखिन्छ । विशुुद्ध मनोरञ्जन तथा कथा वाचनका लागि गरिने बर्मेली पपेट थिएटरको शैली हो लोक पपेट । लोक नाट्यभित्र पर्ने बर्मेली पपेटलाई ‘योको थे’ भनिन्छ । योको थेको अर्थ हो मेरिनेट पपेट अर्थात् धागोले चलाउने पपेट । बर्मामा योके थेको इतिहास बौद्ध पगोडासँग जोडिएको देखिन्छ । तत्कालीन राजाले पगोडाहरूमा कलाकारहरू राख्ने चलन चलाए तिनै कलाकारहरूले पपेट थिएटरद्वारा विभिन्न उत्सवहरूमा दर्शकहरूलाई मनोरञ्जन दिन वा कथा भन्न प्रयोग गर्न थाले । अहिले पनि हरेक बौद्ध गुुम्बाहरूमा कलाकार मण्डली तथा कलाकारहरूको एउटा नाइके स्थापना गर्ने चलन छ । तर, फरकफरक बौद्ध समुुदायमा फरकफरक कलाकारिताको प्रभाव पाइन्छ ।
पपेट थिएटरले अन्य नाट्य प्रस्तुुतिहरूको सीमालाई तोड्ने अधिकार हुुन्छ । जस्तो कि तत्कालीन समयमा बर्मामा महिला कलाकारहरूलाई नाटक खेल्ने अधिकार थिएन । पपेटर (पपेट नचाउने कलाकार) हरू पनि पुुरुष नै हुुन्थे । तर, पपेटका चरित्रहरूमा महिला–पुुरुष दुुवै हुुन्थे । आममानिसले राजारानी वा सैनिकको लुुगा लगाउन पाउँदैन थिए तर पपेटलाई त्यो सीमा थिएन । त्यसैले आममानिस यस किसिमका पपेट प्रस्तुुतिहरू हेरेर खुुसी हुुन्थे । तर ब्रिटिस र त्यसपछिका सैनिक शासकहरूले पनि पपेटलाई मनोरञ्जनका रूपमा मात्रै लिए । कलाकारहरूले व्यंग्य मिसिएको प्रस्तुुति दिन डराउँथे । अचेल बर्माको लोक पपेट थिएटर लगभग लोप हुुने अवस्थामा रहेछ । यही लोक अर्थात् योके थे पपेट थिएटरमा करिब ११ वर्षदेखि पूर्ण कालिक रूपमा काम गरिरहेको रहेछ खिनको पपेट्री समूहले ।
निर्देशक खिन पपेट थिएटरमा लाग्नुुअगाडि सिम्यान रहेछन् । करिब दुुई दशकसम्म उनले पानीजहाज चालकको जागिर खाए । संसारका धेरैजसो देश पानीबाटै पुुगे उनी । सानैदेखि नाच्न/गाउन मन पराउने उनलाई उनकी आमाले सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूमा लिएर जान्थिन् । जब उनी पानीजहाजमा यात्रा गर्न थाले, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुुगेर गरिने वि श्रामका बेला उनी थिएटरमै जान रुचाउँथे । उनी भन्छन्, ‘मैले संसारका धेरै थिएटरहरू हेर्ने मौका पाएँ ।’
जहाज चालकबाट अवकाश लिएपछि उनले माइक्रोबस किनेर केही वर्ष रंगुुनमा पर्यटनको काम गरे । त्यतिखेर उनलाई लाग्यो, कलालाई पर्यटनसँग जोड्नुुपर्छ । त्यसपछि उनले बर्माका तीनजना पपेटरहरूलाई भेटे । उनीहरूले नै पपेट बनाए । उनी र उनकी श्रीमती टिनटिनलाई तालिम थिए । त्यसपछि उनले रंगुुनको सिटी हल भाडामा लिएर सन् २००६ देखि नियमित पपेट थिएटर गर्न थाले । सन् २००७ मा सैनिक शासन विरुद्धमा बर्मामा ठूलो आन्दोलन भयो । यसले खिनको व्यापारमा ठूलो असर ग¥यो । उनको व्यापार तीन वर्षसम्म पूर्ण घाटामा गयो । उनी भन्छन्, ‘मैले हरेक वर्ष तिर्नुुपर्ने थिएटरको भाडा, व्यवस्थापन र कलाकारको तलबका कारणले कमाएको सम्पत्ति सकेँ । गाडी पनि बेचेँ ।’
तर, सन् २००८ मा उनलाई एउटा अवसर आयो । ह्याप्पी वल्र्ड नामक पार्कले उनलाई पपेट थिएटरका लागि निम्तो दियो । त्यही पार्कको हलमा बिदाको दिन बाहेकका दिनमा भाडा नतिरी उनले पपेट थिएटर प्रदर्शन गर्ने अवसर पाए । सन् २००८ को मेमा बर्मामा ठूलो वर्षा र आँधी आयो । करिब एक लाख मान्छे मरे । खिनका पपेट थिएटरका सबै सामान बगाए । उनी भन्छन्, ‘यो मेरा अर्को ठूलो संकट थियो । म पूर्ण रूपमा निरुत्साहित भएँ । तर, मेरी श्रीमतीले सहयोग गरिन् । आफ्ना गहनाहरू बेचेर र मलाई सान्त्वना दिएर फेरि काम सुुरु गरौं भनिन् ।’
त्यसपछि खिन दम्पतीले आफ्नी छोरीलाई पनि समूहमा मिसाए । मार्क र खुुला ठाउँमा थिएटर देखाउन थाले । सन् २००८ कै अन्त्यमा दुुबईको ठूलो महोत्सवमा उनीहरूले निम्तो पाए । इन्डोनेसियामा आयोजित महोत्सवहरूमा दुुई ठूला पुुरस्कार पाए । उनका लागि सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि सन् २०१२ देखि खिनको पपेट थिएटरले बर्माको हरेक पर्यटन पुुस्तिकामा ठाउँ पायो । म उनको थिएटरसम्म पुुग्नुुको भित्री कारण पनि यही रहेछ । गुुगल सर्चमा उनको थिएटर अगाडि देखा पर्छ । आज उनको १९ वर्षीया छोरी र १४ वर्षीय छोरा पनि उनीसँगै मिसिएका छन् । उनीहरूको परिवारबाहेक अरू दुुई महिला यो समूहमा छन् । खिनको परिवारको इच्छाशक्ति र आत्मविश्वासले यहाँसम्म पुर्‍यायो । अहिले रंगुुनमा हेर्नुुपर्ने १० चिजमध्ये पपेट्री होम पनि पर्दो रहेछ । अचेल उनी पार्क, महोत्सव वा विभिन्न कार्यक्रममा आफ्नो समूहको प्रस्तुुति दिन्छन् । र, आफ्नै घरमा निर्मित यो मिनि थिएटरमा हरेक साँझ पपेट नचाउँछन् । प्रायः सबै दर्शक पर्यटक हुुन्छन् । एउटा टिकटको मूल्य १० हजार च्याट हो । यो लगभग एक हजार नेपाली रुपैयाँ बराबर हुुन्छ ।
त्यस साँझ पनि १७ दर्शकहरू लगभग नौवटा देशबाट थिए । आफ्ना छोराछोरीसहित आएकी जर्मनीकी लिट्टे मेरो उत्सुुकता देखेर अचम्ममा परिन्, किनभने मेरो ध्यान प्रस्तुुतिमा भन्दा बढी दर्शकहरूतिर थियो । त्यहाँ कोरिया मेक्सिको, इङ्ल्यान्डदेखि नेपालसम्मको सानो संसार नै उपस्थित थियो । पपेट्री होमको नियम के भने कम्तीमा दुुई २ दर्शक भए पनि उनीहरू थिएटर देखाउँछन् । खिन भन्छन्, ‘कहिलेकाहीँ त मान्छेहरू फोन वा ईमेलमार्फत सिट बुुक गर्छन् । हामी तयार भएर बस्छौं तर साँझ एकजना पनि देखा पर्दैनन् । तर, हामी कहिल्यै निराश भएनौं किनभने यो हामीले चाहेर गरेको काम हो ।’
चीनसँग ठोस प्रस्ताव राख्न चुक्यो नेपाल 5276
'लोकतन्त्र जोगाउन संविधान मिचेकै हुँ' 22501
ऐनसँग बाझिएको 'ऋषिपञ्चमी' बिदा 5627
घरमा काम गर्नेबाटै हत्या 1690